UAllah Akabophekile - Ahmadou Kourouma - Afrikhepri Fondation
ngoLwesibili, Ephreli 13, 2021
Uindaba embi eshiya ungakhulumi. Kusuka ku-Ahmadou Kourouma omkhulu kakhulu. UAllah Akudingeki alunge kuzo zonke izinto zakhe lapha emhlabeni.
Igama lakhe nguBirahima. Uneminyaka eyishumi noma eyishumi nambili, akazi ngempela. UngumMalinke wase-Ivory Coast, uyakwazi lokho futhi ungumSulumane futhi ukholelwa kumnikeli wakhe u-Allah.
UBirahima ungumlingiswa ophambili wale noveli futhi umbalisi. Kungenxa yamagama akhe avame ukugqagqana futhi ashubile okobuntwana lapho sizokwazi konke kusuka ebuntwaneni bakhe njengomndeni kuya empilweni yakhe njengesosha eliyingane noma isosha elincane ngesiNgisi.
Akunasidingo sokungena emininingwaneni eyisicefe, lena inoveli efingqiwe futhi ebucayi egudla ubuthongo ngesihluku esingaka esitsheliwe. Sonke sinomqondo wezimpi zobuzwe ezahlasela eLiberia naseSierra Leone ngeminyaka yama-90s, noma ngemicabango yethu emibi kakhulu sikude neqiniso elinonya.
Lapho kushona unina, uBirahima uphathiswe ubabekazi wakhe uMahan. Lapho enyamalala kungazelelwe, kuseceleni kukaYacouba, isangoma esingumSulumane, lapho ezama ukumthola ngazo zonke izindlela. Ngenkathi ewela ihlathi ngemuva kwehlathi, amazwe ngamazwe esimweni sempi, uzowela ezandleni zamaqembu ahlukene ahlomile futhi uzodlula esosaneni elisencane eliyisosha aye kokungaphezu kokuqinisekisiwe.
Le Birahima encane inonya futhi ihlambalaza. Ngibonga yena nezichazamazwi zakhe ezine, okuyisichazamazwi iLarousse kanye nePitit Robert, iqoqo lezimpawu ezithile zezinhlamvu ezimnyama zesiFulentshi sase-Afrika kanye nesichazamazwi sikaHarrap, utshela izigemegeme zakhe ngokuchaza amagama noma izinkulumo eziyinkimbinkimbi kakhulu izindlebe ezingenalwazi.
Kuwo wonke uhambo lwabo, yena noYacouba bazowela ngokulandelana ezandleni zebutho le-NPFL "I-National Patriotic Front yaseLiberia", ibutho le-ULIMO "I-United Liberation Movement for Liberia", umbutho wobushiqela uPrince Johnson eLiberia, nasesandleni seRUF "Revolutionary United Front" eSierra Leone ngaphansi kukamongameli kaTeffi.
e UAllah Akabophekile, Ahmadou Kourouma ibhekisa kakhulu enkolweni kepha nasekufihleni izinkolelo ezifana nobuthakathi. Omashiqela bala mazwe abacekelwa phansi ukubulawa kwabantu nobugebengu badonsela isimilo sabo ezinkolelweni ezingabazisayo ezazibanika ilungelo lokuphila nokufa phezu kwawo wonke umuntu ngendlela engenabuntu nenesihluku. Izingane ezingamasosha ezingamantombazane ezidliwayo neziphoqelelwe zivame ukuba nobudlova ngesikhathi semizabalazo ehlomile. Bahlala bengelutho njengezigqila ezinhlanu futhi kaningi abanathemba lekusasa.
U-Ahmadou Kourouma, umbhali wesikhathi esizayo ozinikele.
U-Ahmadou Kourouma (1927-2003) ungumbhali wase-Ivory Coast odabuka eMalinké. Njengoba ayenethuba lokufunda, wazimisa kusenesikhathi kakhulu evuna uhlelo lokulwa nohlelo lwamakholoni. Edingiselwe e-Algeria lapho aba ngumbhali khona, wagcina ephikisana nanoma yiluphi uhlobo lobushiqela.
Ngokuzihlukanisa ngokubhala kwakhe lapho esebenzisa khona isiko lomlomo ukudlulisa imiyalezo kubafundi bakhe, uhlonipha isiko lase-Afrika eligcwele izaga nokuphindaphinda okufana ne-griot.
Encwadini yakhe yokugcina agcwalise ngayo " UAllah Akabophekile »U-Ahmadou Kourouma uklonyeliswe ngomklomelo iRenaudot 2000 kanye neGoncourt Prize kubafundi bezikole zamabanga aphezulu.
Ingqungquthela no-Ahmadou Kourouma encwadini yakhe "Allah akabophekile" EBourg-Neuf Theatre
Liyini ikusasa lamasosha ezingane?
Lapho ungenaye ubaba, umama, ubhuti, udadewenu, ubabekazi, umalume, lapho ungenalutho nhlobo, into enhle kakhulu ukuba yisosha eliyingane.
Amasosha ezingane enzelwe labo abangenalutho olunye abangalwenza emhlabeni naseZulwini lika-Allah. - Khipha, ikhasi 118-119.
Amasosha ezingane aphakathi kweminyaka engu-7 no-18 ubudala futhi ahambisana nombutho wezempi. Kunamasosha ezingane ezingama-250 emhlabeni jikelele kanti angaphezu kwezigidi ezi-000 izingane ezibulewe eminyakeni eyishumi edlule. Abafana akubona bodwa abathintekayo, bangahle babe ngamantombazane.
Amazwekazi anenani eliphakeme lamasosha ezingane yi-Afrika ne-Asia. E-Afrika, zitholakala kakhulu eDemocratic Republic of Congo (DRC), eChad, e-Uganda noma muva nje eMali. E-Asia, amazwe athinteke kakhulu yile nto iMyanmar, iNepal, iPakistan, iPhilippines neSri Lanka.
Ukubuyela empilweni ejwayelekile kunzima kakhulu kulezi zingane. Bambalwa babo abakwazi ukuhlangana kabusha nemindeni yabo uma kusasele eyodwa.
Ngenxa yohlelo lwe-UNICEF lokusiza amasosha ezingane abeke phansi izingalo zawo futhi akhe ikusasa, kusukela ngo-1998 izingane ezingaphezu kwezingu-100 000 sezikhululiwe zabuyiselwa emiphakathini yazo emazweni angaphezu kwali-15 athinteka yizingxabano.
Qaphela ukuthi uFebhuwari 12 unyaka nonyaka umenyezelwe njengoSuku Lomhlaba Wonke Lamasosha Wezingane, olunikezelwe ezinkulungwaneni zabafana namantombazane abaqashwe ngenkani emaqenjini ahlomile.
U-Allah akabophezelekile - u-Prix Renaudot no-Prix Goncourt des Lycéens 2000
Okusha okungu-6 kusuka ku- € 7,00
Kusetshenziswe okungu-63 kusuka ku-1,47 €
Thenga i- € 7,00
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Ephreli 13, 2021 6:39 pm
Umlando wefilosofi wohlanga lwesintu - u-Antoine Fabre-d'Olivet (PDF)
INkosana - UNicolas Machiavelli (Audio)